शरीरको पाचन शक्ति बढाउन यी खानेकुरा खाऔँ | | Uwjalkhabar
शरीरको पाचन शक्ति बडाउन यी खानेकुरा खाऔँ
By ujwal khabar	 Last updated Oct 29, 2020
कात्तिक १३, काठमाडौँ
खानेकुराहरु खानले पनि शरीरको इम्युन सिस्टम बडाउन सकिन्छ । संसारमा थुप्रै यस्ता खानेकुरा छन् जसको सेवनले शरीरको पाचन शक्ति बडाउन सकिन्छ । अहिले कोरोनाको अवस्थामा झन् पाचन शक्ति बडाउन झन् बेसु आवस्यक छ ।
तपाईलाई पनि आफ्नो इम्युन सिस्टम बडाउन इच्छा छ भने अहिले देखिनै आफ्नो खाने बानिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । तल बताइएका खानेकुरा खानाले शरीरको पाचन शक्ति हामी पनि बडाउन सक्छौँ । खानेकुराहरुको नाम यस प्रकार छन् :
१. सिटरस फ्रुट्स – धरैजसो सबै सिटरस फ्रुट्समा भिटामिन सी पइन्छ । भिटामिन सी रुगा, खोकी जस्ता बिरामीको लागि असाध्य राम्रो मानिन्छ . यसले शारिरको पाचन शक्ति बडाउन मदत गर्दछ ।भिटामिन सी, सुन्तला , कागती , अंगुर, जुनार जस्ता सिटरस फ्रुट्समा पाइन्छ । मानिसको शरीरले भिटामिन सी उत्पादन नगर्ने भएकोले समय समयमा हामीले यस्ता सिटरस फ्रुट्सको सेवन गरिरहनु स्वस्थकोलागि राम्रो हो ।
२. ब्रोकलि – ब्रोकलि धरै भिटामिन र मिनिरलले भरिपर्न हुन्छ । यसमा भिटामिन ए , सी र यी भेटिनुका साथै अरु फाइबर र यानटिओकसीडेन्ट पनि पाईन्छ । सागसब्जीहरुमा ब्रोकलिलाई सबै भन्दा राम्रो मान्दा केहि गलत हुनेछैन । यस्लाई काँचो खादा शरीरलाई एकदम राम्रो हुन्छ । रिसर्च अनुसार ब्रोकलिलाई उमालेर खादा एसको सबै न्यूट्रेयन्ट्स शरीरले पाउछ ।
३.लसुन – लसुन संसारको धरैजसो सबै खानेकुरामा लसुन भेटिन्छ । यसले खानेकुरामा स्वाद थप्नुका साथै स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउन मदत गर्दछ । यसको सेवनले इनफेक्सन संग लड्न मदत गर्दछ। साथै यसको सेवनले ब्लड प्रेसरलाई कम गर्न पनि कहिन कहि मदत गरिरहेको हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरको पाचन सक्ति बडाउन मदत गर्दछ ।
४. अदुवा – धरैजसो सबै रोगको दबाई भनेर अदुवालाई चिनिन्छ । नेपाली खानेकुरामा पनि धेरैजसो अदुवाको प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोग धेरै जसो पेटको रोगको लागि गरिन्छ । यसका अरु पनि धरै फाइदाहरु छन् जस्तै यसको सेवनले मलती निको पर्ने, महिनावारी हुदाको दुखाईलाइ कम गर्ने , पाचन शक्ति बढाउने आदि । यसमा थुप्रै यानटिओकसीडेन्ट भेटिन्छन् जसले रुगहरु संग लड्न मदत गर्छ ।
५. साग – सागमा भिटामिन सी को मात्रा बेसी हुन्छ । भिटामिन सी मात्र नभएर यसमा अरु थुप्रै यानटिओकसीडेन्ट र बेटा क्यारोटिन पनि पाइन्छ । यी पदार्थहरुको सेवनले शरीरको इन्फेक्सन संग लड्ने क्षमता बडाउछ र शरीरको इम्युन सिस्टमलाई पनि मजबुत पार्न मदत गर्दछ । ब्रोकलि जस्तै सागअनि काम समयसम्म पकाएर सेवनगर्नाले यसमा हुने सबै भिटामिन शरीरले पाउदछ ।
६. दही – दहीको सेवनले अरु थुप्रै रोगसंग लड्न मदत गर्दछ । मिसावट गरिएको दही भन्दा साधा दहीको सेवनले शरीरलाई धरै फाइदा पुर्याउने गर्छ । साधा दहीलाई अरु फलफुलसंग मिसाएर वा मह मिसाएर सेवन गर्दा पनि हुन्छ । यसले हाम्रो शरीरको अरु रोगव्यथा संग लड्न सहयोग गर्छ ।
७. बदाम – जाडोमा रुगखोकी बाट बच्न भिटामिन सी र यी एकदम जरुरि हुन्छ । शरीरको इम्युन सिस्टमलाई मजबुत राख्न बदाम जस्तो यानटिओकसीडेन्टको सेवन गर्नु पर्छ । यो भिटामिन र अरु ह्यालदि फ्याटले भरिपुर्ण हुन्छ । ठुलो मान्छेको शरीरलाई दिनमा १५ एम जी जति भिटामिनको जरुरत हुन्छ तेसैले दिनमा आधा कप जति अल्मोन्ड को सेवन गरे शरीरलाई राम्रो गर्छ । यसले दिमागी क्षमता पनि बडाउन मदत गर्छ ।
८. ग्रिन टि – ग्रिन ती र कालो चिया दुबैमा यानटिओकसीडेन्ट भेटिन्छ । ग्रिन टि मा इपिग्यालोकाटेचिन (EGCG) भन्ने यानटिओकसीडेन्ट भेटिन्छ । विज्ञ अनुसार यसले शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलिओ बनाउन मदत गर्छ ।
९. पपया – पपया फलमा भिटामिन सी पाईन्छ । यसमा केहि मात्रामा पोटासियम, म्याग्नेसियम र फोलेट पनि भेटिन्छ । यी सबै पदार्थ स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो मानिन्छ ।
१०. किवी – पपया जस्तै किवीमा पनि थुप्रै भिटामिन र पासण हुन्छ . किवीमा पोटासियम , फोलेट , भिटामिन के र भिटामिन सी जस्ता पदार्थहरु पाइन्छन् । भिटामिन सी ले शरीरको सेतो ब्लड सेललाई मजबुत बनाउछ जसले अरु सम्पूर्ण शरीरलाइ रोग बाट बचाउछ ।
सबैजनाले स्वास्थ्य जीवनसैली अपनाउ र स्वास्थ्य जीवन जीऔँ । स्वास्थ्य खाने कुरा खाउ र शरीरको इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाऔँ ।